ကင်မရာကို ကိုယ်ထည်မှာ မြှုပ်ထားတဲ့ Oppo Find X | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone ကင်မရာကို ကိုယ်ထည်မှာ မြှုပ်ထားတဲ့ Oppo Find X
ဘေးဘောင်အနားသတ်မဲ့ Screen မျက်နှာပြင်ပြည့် Display ၊ ဖုန်းရဲ့ပြင်ပကိုယ်ထည်မှာရှေ့/နောက်ကင်မရာတွေတစ်ခုမှမပါဝင်တော့တဲ့ Oppo Find X စမတ်ဖုန်းကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ ဒီဖုန်းမှာ ဖုန်းရဲ့အောက်ခြေကနေ အပေါ်ဆုံးထိပ်ဘောင်အနားသတ်အထိ Screen အပြည့်ဖြစ်ပြီး ဖုန်းရဲ့ရှေ့ Selfie Camera နဲ့ အခြား Sensor တွေဟာလည်း ဖုန်းရဲ့ Screen ထိပ်မှာမပါဝင်တော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဖုန်းရဲ့နောက်ဘက်ခြမ်းဒီဇိုင်းအနေအထားမှာလည်း Camera တွေမပါဝင်တော့ပါဘူး။ ဒါဆို Camera တွေအတွက် ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲ ?
Oppo က Find X စမတ်ဖုန်းမှာ Slider Mechanism ကိုအသုံးပြုပြီး Camera Module တစ်ခုလုံးကို ဖုန်းရဲ့ရှေ့ Display အခြမ်းနဲ့ဖုန်းရဲ့နောက်ဖုံးအကြား အလယ် Middle Frame ထဲမှာ Slider Module အနေနဲ့နေရာချထားပါတယ်။ ယင်း Slider Module (Camera Module) ရဲ့ရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်မှာတော့ Selfie Camera , Earpiece Speaker နဲ့အခြား sensor တစ်ချို့ ပါဝင်ပြီး နောက်ဘက်မျက်နှာပြင်မှာတော့ Dual Camera တွေနဲ့ LED flash တွေပါဝင်ပါတယ်။ Camera app ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ယင်း Slider Module ကဖုန်းရဲ့အပေါ်ကိုထွက်လာမှာပါ။ ကင်မရာသုံးဖို့မလိုတဲ့အနေအထားမှာတော့ ယင်း Camera Module တစ်ခုလုံးက ဖုန်းကိုယ်ထည်အတွင်းထဲမှာရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဖုန်းရဲ့ရှေ့မျက်နှာပြင်မှာလည်း ဘေးဘောင်အနားသတ်မဲ့ မျက်နှာပြင်ပြည့် Display နဲ့ဖြစ်သွားပြီး Camera Sensor နေရာအတွက် နေရာလုံးဝချန်စရာမလိုတဲ့ ဒီဇိုင်းအနေအထားနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်။ Vivo Nex မှာတုန်းကလည်း Selfie Camera ကို ဖုန်းရဲ့ထိပ်ဘောင်ထဲကနေထွက်လာမယ့် Pop-up Camera ပုံစံလေးဖန်တီးထားခဲ့ပြီး ယခု Oppo Find X မှာတော့ ဖုန်းရဲ့ရှေ့/နောက် Camera အကုန်လုံးကိုဖုန်းကိုယ်ထည်အတွင်းထဲမြုပ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံနဲ့ဖန်တီးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ Camera Module ရဲ့ နောက်ဘက်ခြမ်း Dual Camera တွေက 16MP sensor with f/2.0 aperture + 20MP sensors with f/2.2 aperture တွေဖြစ်ပြီး ရှေ့ Selfie Camera က 25 MP lens ဖြစ်ပါတယ်။
Oppo Find X မှာ Fingerprint Scanner လုံးဝမပါဝင်တော့ဘဲ iPhone X မှာကဲ့သို့ မျက်နှာနဲ့ Lock ဖွင့်ရမယ့် 3D Face Scanning feature ကိုပဲထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ မျက်နှာနဲ့ Lock ဖွင့်ဖို့လိုအပ်လာတဲ့အခါမှာလည်း Camera Module ကဖုန်းကိုယ်ထည်ထဲကနေအပေါ်ကိုတက်လာမှာပါ။
Oppo Find X မှာ 6.42 လက်မအရွယ် 1,080 x 2,340 AMOLED display ကိုအသုံးပြုထားပြီး Screen Ratio အနေနဲ့ 19.5:9 aspect ratio ရှိပါတယ်။ Display ဟာ ဖုန်းရှေ့မျက်နှာပြင်ရဲ့ ၉၂.၂၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိနေရာအပြည့်နီးပါးယူထားတာကြောင့် ထွက်ခဲ့သမျှ စမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာတော့ မျက်နှာပြင်ပြည့်နီးပါး Display အဖြစ်ဆုံးဖုန်းလို့ဆိုရမှာပါ။ Oppo Find X ရဲ့ Display ကတော့ Galaxy S9 လို Edge to edge Display နဲ့ပါ။
Oppo Find X မှာ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေအတွက် အကောင်းဆုံး Processor ဖြစ်တဲ့ Snapdragon 845 Chipset အသုံးပြုထားပြီး RAM 8GB ပါဝင်ပါတယ်။ Storage 256GB နဲ့ Storage 128GB ဆိုပြီး Version ၂ မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ System အနေနဲ့ Android 8.1 Oreo ကိုအခြေခံတဲ့ ColorOS 5.1 ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ Dual SIM အမျိုးအစားစမတ်ဖုန်းဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီပမာဏအနေနဲ့ 3730 mAh battery ပါဝင်ပါတယ်။
သြဂုတ်လမှာစတင်ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ ၁၃ သိန်းဝန်းကျင်ကျသင့်မှာပါ။
ဘေးဘောငျအနားသတျမဲ့ Screen မကျြနှာပွငျပွညျ့ Display ၊ ဖုနျးရဲ့ပွငျပကိုယျထညျမှာရှေ့/နောကျကငျမရာတှတေဈခုမှမပါဝငျတော့တဲ့ Oppo Find X စမတျဖုနျးကိုမိတျဆကျလိုကျပါပွီ။ ဒီဖုနျးမှာ ဖုနျးရဲ့အောကျခွကေနေ အပျေါဆုံးထိပျဘောငျအနားသတျအထိ Screen အပွညျ့ဖွဈပွီး ဖုနျးရဲ့ရှေ့ Selfie Camera နဲ့ အခွား Sensor တှဟောလညျး ဖုနျးရဲ့ Screen ထိပျမှာမပါဝငျတော့ပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ ဖုနျးရဲ့နောကျဘကျခွမျးဒီဇိုငျးအနအေထားမှာလညျး Camera တှမေပါဝငျတော့ပါဘူး။ ဒါဆို Camera တှအေတှကျ ဘယျလိုလုပျထားလဲ ?
Oppo က Find X စမတျဖုနျးမှာ Slider Mechanism ကိုအသုံးပွုပွီး Camera Module တဈခုလုံးကို ဖုနျးရဲ့ရှေ့ Display အခွမျးနဲ့ဖုနျးရဲ့နောကျဖုံးအကွား အလယျ Middle Frame ထဲမှာ Slider Module အနနေဲ့နရောခထြားပါတယျ။ ယငျး Slider Module (Camera Module) ရဲ့ရှဘေ့ကျမကျြနှာပွငျမှာတော့ Selfie Camera , Earpiece Speaker နဲ့အခွား sensor တဈခြို့ ပါဝငျပွီး နောကျဘကျမကျြနှာပွငျမှာတော့ Dual Camera တှနေဲ့ LED flash တှပေါဝငျပါတယျ။ Camera app ကိုဖှငျ့လိုကျတာနဲ့ ယငျး Slider Module ကဖုနျးရဲ့အပျေါကိုထှကျလာမှာပါ။ ကငျမရာသုံးဖို့မလိုတဲ့အနအေထားမှာတော့ ယငျး Camera Module တဈခုလုံးက ဖုနျးကိုယျထညျအတှငျးထဲမှာရှိနမှောဖွဈတဲ့အတှကျ ဖုနျးရဲ့ရှမေ့ကျြနှာပွငျမှာလညျး ဘေးဘောငျအနားသတျမဲ့ မကျြနှာပွငျပွညျ့ Display နဲ့ဖွဈသှားပွီး Camera Sensor နရောအတှကျ နရောလုံးဝခနျြစရာမလိုတဲ့ ဒီဇိုငျးအနအေထားနဲ့ဖွဈသှားပါတယျ။ Vivo Nex မှာတုနျးကလညျး Selfie Camera ကို ဖုနျးရဲ့ထိပျဘောငျထဲကနထှေကျလာမယျ့ Pop-up Camera ပုံစံလေးဖနျတီးထားခဲ့ပွီး ယခု Oppo Find X မှာတော့ ဖုနျးရဲ့ရှေ့/နောကျ Camera အကုနျလုံးကိုဖုနျးကိုယျထညျအတှငျးထဲမွုပျထားတဲ့ ဒီဇိုငျးပုံစံနဲ့ဖနျတီးထားတာတှရေ့ပါတယျ။ Camera Module ရဲ့ နောကျဘကျခွမျး Dual Camera တှကေ 16MP sensor with f/2.0 aperture + 20MP sensors with f/2.2 aperture တှဖွေဈပွီး ရှေ့ Selfie Camera က 25 MP lens ဖွဈပါတယျ။
Oppo Find X မှာ Fingerprint Scanner လုံးဝမပါဝငျတော့ဘဲ iPhone X မှာကဲ့သို့ မကျြနှာနဲ့ Lock ဖှငျ့ရမယျ့ 3D Face Scanning feature ကိုပဲထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။ မကျြနှာနဲ့ Lock ဖှငျ့ဖို့လိုအပျလာတဲ့အခါမှာလညျး Camera Module ကဖုနျးကိုယျထညျထဲကနအေပျေါကိုတကျလာမှာပါ။
Oppo Find X မှာ 6.42 လကျမအရှယျ 1,080 x 2,340 AMOLED display ကိုအသုံးပွုထားပွီး Screen Ratio အနနေဲ့ 19.5:9 aspect ratio ရှိပါတယျ။ Display ဟာ ဖုနျးရှမေ့ကျြနှာပွငျရဲ့ ၉၂.၂၅ ရာခိုငျနှုနျးအထိနရောအပွညျ့နီးပါးယူထားတာကွောငျ့ ထှကျခဲ့သမြှ စမတျဖုနျးတှထေဲမှာတော့ မကျြနှာပွငျပွညျ့နီးပါး Display အဖွဈဆုံးဖုနျးလို့ဆိုရမှာပါ။ Oppo Find X ရဲ့ Display ကတော့ Galaxy S9 လို Edge to edge Display နဲ့ပါ။
Oppo Find X မှာ မိုဘိုငျးဖုနျးတှအေတှကျ အကောငျးဆုံး Processor ဖွဈတဲ့ Snapdragon 845 Chipset အသုံးပွုထားပွီး RAM 8GB ပါဝငျပါတယျ။ Storage 256GB နဲ့ Storage 128GB ဆိုပွီး Version ၂ မြိုးနဲ့ထုတျလုပျထားပါတယျ။ System အနနေဲ့ Android 8.1 Oreo ကိုအခွခေံတဲ့ ColorOS 5.1 ကိုအသုံးပွုထားပါတယျ။ Dual SIM အမြိုးအစားစမတျဖုနျးဖွဈပွီး ဘကျထရီပမာဏအနနေဲ့ 3730 mAh battery ပါဝငျပါတယျ။
သွဂုတျလမှာစတငျရောငျးခမြှာဖွဈပွီး ဈေးနှုနျးအနနေဲ့ ၁၃ သိနျးဝနျးကငျြကသြငျ့မှာပါ။
Previous articleiPhone 3GS ကိုတောင်ကိုရီးယားမှာ ပြန်လည်ရောင်းချတော့မည်
Next articleSuper VOOC အားသွင်းစနစ်နဲ့ Find X Lamborghini edition ကိုပါ Oppo မိတ်ဆက်